I-Instagram izakususa nini ukuthanda? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 17, 2019 0 IiCententarios 954
Ukusukela ekuqaleni kwe-instagram, kwanakwiprototype yayo. Iqonga linemisebenzi emithathu, eyokupapasha, ukunika ingxelo nokuyithanda. Ezi zokugqibela zenza ukuba abantu banxibelelane nolo papasho abaluthandayo emva koko babanike "bathande". Namhlanje, ukuthanda, amagqabantshintshi, iimbono, kunye nabalandeli ziye zafana nokwamkelwa. Abasebenzisi be-Instagram bahlala bejonge ukufumana ngaphezulu kwezi. Ngokwezifundo, ukuthanda kuthintela impilo yengqondo yabasebenzisi ngendlela ethile. Uphendule njani u-instagram koku? Ewe, ukubeka etafileni into endiyithandayo, shiya iqonga. KodwaXa i-instagram izakususa ukuthanda? Asikayazi loo nto.
Impembelelo ekunwe kuyo iiwebhsayithi zokuncokola kuluntu kwiminyaka yakutshanje kakhulu. Wonke umntu ufuna ukuphumelela kuzo, azive amkelekile kwaye adume ngazo. Uninzi ulufezekisile, kodwa ifuthe elibi elishiya eli bantu bangenzi kangako. Ngesi sizathu, i-instagram iqwalasele ukufumana ukuthandwa kwiqonga layo.
Ukususela ekuqaleni kwe-instagram ukuthandwa kuhamba kunye nomsebenzisi. Kodwa zintoni? Ukuthandwa yindlela yabasebenzisi yokunxibelelana nabanye, oku ngokubazisa ukuba bathanda iposti. Okwangoku, ukuthandwa okanye ukuthandwa yi-instagram kuthathwa njengendlela yokulinganisa ukuthandwa komsebenzisi. Okukhona ndikuthanda, kokukhona wamkeleke kwaye uthandwa. Ngeli xesha lokunxibelelana kwezentlalo, ukuthanda kube yenye yezinto ezibaluleke kakhulu kubasebenzisi be-instagram, abancinci nabadala.
Kunyaka ophelileyo, i-Instagram ithathe amanyathelo okwahlula uluvo loluntu. Oku kukususa ukuthanda kwiqonga lakho. Oku kungenxa yokuba uninzi lwezifundo ziqinisekisa ukuba ukuthanda kunempembelelo embi kubasebenzisi be-instagram. Kwaye ngaphandle kwento yokuba i-instagram khange isenze eso sigqibo. Abaninzi bakhathazeka xa i-instagram izakususa ukuthanda.
Ngaba i-Instagram iya kufana nabo?
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, i-Instagram yayithetha malunga nokususa ukuthanda kwiqonga layo. Yintoni eyenze ukuba abasebenzisi beqonga bazibuze ukuba ngaba ngokwenene bazakwenza njalo. Kwaye ukuba kunjalo xa i-instagram izakususa ukuthanda. Sele sithethile izinto endizithandayo, kwaye sikwakhankanya nentsingiselo abanikiweyo ngabasebenzisi be-Instagram. Indlela abadumele ngayo abayisebenzisayo sele imbi. Izifundo ezininzi zivelise ukuba ifuthe elibi elithandayo kunye neminqweno yokuthandwa enalo kubasebenzisi. Yile nto iye yakhokelela kwi-Instagram ukuba ithathele ingqalelo ukususa into eyaziwayo.
Xa i-instagram izakususa ukuthanda Yinto abantu abaninzi abazibuza ngayo. Abanye babona icala eliqinisekileyo ukuba oku kuya kuba nalo kubemi kwaye abanye bakhalaza ngalo. Inyani yile yokuba ukuthandwa kwe-instagram kuneentsingiselo ezahlukeneyo kwaye kukho iintlobo ezahlukeneyo. Kodwa, kunjalo, eyona yona ibalaseleyo kwezi zezi kukuba ekuthandeni kwam ndikuthandayo. Nangona iqonga lingazange libhengeze ngokusemthethweni ukuba bayasusa ukuthandwa. Abaninzi bahlala bebuza malunga xa i-instagram izakususa ukuthanda.
Inyani malunga nokuba ukuthandwa kweqonga kususwe akukho bukhali njengoko abaninzi bakholelwa. Izinto ezithandwayo aziyi kutshabalala eqongeni. Njengoko i-instagram yazisa ngeemvavanyo ezithile azenzileyo eCanada kulo nyaka. Kwezi mvavanyo ukuthandwa kweqonga akuzange kupheliswe. Into eyasuswayo yayikukuchasana kwezinto ezithandwayo. Ke ndiyabathanda ukuba baya kufumaneka. Ukuba ungathanda ukupapasha kwaye wazi ukuba ngubani kwaye ungaphi Nguwe kuphela oya kuba nolwazi. Abanye baya kubona kuphela abanye abantu abayithandileyo, kodwa bangaze bayiliye le. Ndiyeke ukumkhathaza xa i-instagram izakususa ukuthandwa.
Inani lokuthandwa, izimvo, abalandeli Ukuboniswa kwamabali abe yinto eyaziwayo kubasebenzisi be-instagram. Kuba ezi zibabona njengegama elifanayo lokuphumelela kwaye baziva bamkelekile. Oku kuthambekela akupheleli kwi-instagram, kodwa nakwezinye iinethiwekhi zentlalo. Kwaye ifikelele kakhulu kubemi kangangokuba iingcali ezininzi ziye zeza kulumkisa ngefuthe elibi lokuthandwa ziinethiwekhi zentengiso yoluntu ezinayo kumsebenzisi.
Ngokungafaniyo nezinye iiwebhusayithi zokuncokola. I-Instagram ihlawule ingqalelo kwiingcebiso zeengcali kunye nezicelo zomsebenzisi. Okwangoku oku kubonakalisiwe ngokubeka ingcinga yokuphelisa ikhawuntala yokuthandwa. Kananjalo kwisaziso sokuphawula intiyo ekhoyo kwiqonga layo ukusukela kulo nyaka. Zonke iinethiwekhi zentlalo zinalo icala elimnyama.
Yintoni i-instagram enenjongo yokuyiphumeza ngokushenxisa i-ukuthanda counter yile ilandelayo:
Ukupheliswa kwengqondo yomhlambi
Kwimvavanyo ezenziwa ngu-instagram ikhawuntari yokuthandayo isusiwe. Kungenxa yokuba i-instagram inenjongo yokuphelisa ukubalusa kwemihlambi kubasebenzisi bayo. Yeyiphi na ukuba umsebenzisi avume upapasho ngenxa yenani lokuthandwa analo.
Gxila kumgangatho hayi ubuninzi
Kwi-instagram kuyinto eqhelekileyo kakhulu kubasebenzisi abaqhelekileyo kunye nabaphembeleli ukuba bacime ukupapashwa, ukuba abafikanga kwinani elifunwayo Yintoni ebangela ukuba umxholo omuhle ususwe kwiqonga le-instagram ngenxa yoku. Yintoni i-instagram efuna ukushenxisa i-counter ethandwayo kukuba abantu bagxile ekushicileleni umxholo olungileyo. Oku kungaqwalaselwa linani lokuthandwa abanokukufumana.
Abasebenzisi be-Instagram abafuna ukuthandwa kakhulu bacinga ngomxholo wabo ukwenza oku kwenzeke. Ukuthumela iifoto okanye iividiyo ezifikelela kweyona misebenzi iphambili, nokuba zilungile okanye zimbi. Abasebenzisi ke baye bacinge ngakumbi ngokubangela ukuphendula endaweni yokuthumela umxholo olungileyo. Yintoni eyenza ezinye iiakhawunti ezinomxholo ngaphandle kwemvelaphi okanye zibi ukufumana iziphumo ezininzi kuneeakhawunti ezinomxholo olungileyo.
Guqula utshintsho lwabasebenzisi
Ukuba isithandwa esiphikayo sisusiwe umsebenzisi uya kushiya uxinzelelo ngasemva. Kuba akukho mntu uyimfihlo imbonakalo yabantu yokufumana izinto abanazo nenani lokuphendula abanako. Ukuba lo msebenzi we-Instagram uphelisiwe, umsebenzisi uya kuba nenkululeko yokushicilela oko akufunayo, ngaphandle kwesidingo sokucinezela ukwamkelwa koku.
Imiceli mngeni kunxibelelwano lwasekhaya ihlala ihleli. Yinto eqhelekileyo ukubona abantu bebenza ukuba bafumane iimpendulo ezingakumbi, nokuba ngaba bayathanda na okanye akunjalo kusini na. Abantu banika ukubaluleka okukhulu kwixabiso lokuthandwa, abalandeli kunye namagqabaza abanawo kwiinethiwekhi zabo zentlalo. Kwaye oku kuyichaphazele impilo yabo yengqondo. Ingayitshintsha indlela abantu abacinga ngayo nangabanye.
Abasebenzisi bezonxibelelwano zentlalo, ukuba i-instagram ingabeka kanjani na ubomi babo emngciphekweni, nokuba yifoto entle, ividiyo okanye ukufezekisa omnye wemiceli mngeni eyaziwayo eyenziweyo kwinethiwekhi. Ezinye azinangqondo, ezinye zimana ziyimingcipheko. Njengakwimeko yemiceli mingeni efana:
Umceli mngeni Kiki: Umceli mngeni oquka ukwehla emotweni usiya kudanisa ngengoma Kumvakalelo wam, rapper Drake ngasemva. Ngokuqinisekileyo, oku kubangele iingozi ezininzi. Ukongeza kwiividiyo ezininzi zentsholongwane.
Umngeni weCondom: Apho umntu kwakufuneka agcwalise ikhondomu aze ayiphose entloko. Kwaye faka ikhondomu ngeempumlo uze uyisuse emlonyeni. Zombini imiceli mngeni inokubakhokelela abantu kunyango.
Le mingeni mibini ibe yeyona idumileyo kule minyaka idlulileyo. Nangona kunjalo kukho abanye abaphantse babe nentsholongwane nto leyo ekhokelela abantu kwingozi ezinkulu kakhulu. Ungawaphosa njani amanzi abilayo, ityiwa kunye ne-ice kwaye uthathe nesichumisi. Ukongeza kwezinye izinto ezinobuchule abasebenzisi benethiwekhi yentlalo abakwazi ukuzenza ukuze babe nevidiyo yentsholongwane, ukuthandwa ngakumbi, izimvo kunye nabalandeli.
Ngaba ungasihlawula ngokuthandwa?
Into eye yaduma kakhulu kule minyaka idlulileyo ibiludumo olukhawulezileyo olwenziwe ngokuthenga abalandeli. Ukusukela ekuqaleni kwe-instagram, kuye kwakho amaza eendlela zomsebenzisi zokufumana ukuthanda ngakumbi kunye nabalandeli. Nangona kule minyaka idlulileyo zonke ezi fomu ziye emazantsi ngenkangeleko yokuthengwa kwabalandeli. Ngoku abasebenzisi banokufumana ukuthanda okungakumbi, amagqabantshintshi, iimbono, kunye nabalandeli ngobusuku bonke. Oku ngokuhlawula iiakhawunti, amaphepha ewebhu kunye neeapps ukuze uzifumane. Kwaye nangona uninzi lufezekisa ubizo lwalo, zininzi iingozi ezinokuthi zibe nazo Ukuthengwa kwabalandeli.
1 Yintoni ukuthanda?
2 Ngaba i-Instagram iya kufana nabo?
3 Ukuqwalaselwa kokuthandwa
3.1 Ukupheliswa kwengqondo yomhlambi
3.2 Gxila kumgangatho hayi ubuninzi
3.3 Susa ukhuphiswano
3.4 Guqula utshintsho lwabasebenzisi
4 Sisengozini njenge
5 Ngaba ungasihlawula ngokuthandwa?
Xa i-Instagram isitsho impazamo yenethiwekhi engaziwayo